Ungazicima njani iividiyo okanye amajelo angakungeni kwi-YouTube | Iindaba zeGajethi
Ukuba usebenzisa iYouTube rhoqo, ngokuqinisekileyo ukhe wadibana nale meko ilandelayo. Ungena kwiwebhu eyaziwayo kwaye kwiphepha lasekhaya ufumana iingcebiso ezininzi, kunye neevidiyo kunye namajelo anokuba ngumdla kuwe. Ukuza kuthi ga ngoku akukho kubi, kuphela kukuba kwiimeko ezininzi, ezo ngcebiso zisinikwa yiwebhu azisiyo umdla wethu, zivela nakubazobi okanye amajelo ayacaphukisa.
Yintoni esinokuyenza kolu hlobo lwetyala? KwiYouTube sinako phawula kwividiyo nganye okanye kwisitishi esingenamdla kuthi, kodwa yinkqubo enokuthi kwezinye iimeko ibe nde. Ukongeza ekunikezeleni iingcebiso ezintsha, ezinokuthi zingabinamdla kuthi. Kukho isisombululo ngohlobo lokongezwa.
Olu lwandiso kumbuzo lubizwa ngokuba yiBhloko blocker kunye Singazisebenzisa zombini kuGoogle Chrome nakwiMozilla Firefox. Uluvo lwayo kukuba siya kuba nakho ukuvimba okanye sisuse ezo vidiyo okanye amajelo angenamdla kuthi kwaphela. Ngale ndlela, xa singena kwiwebhusayithi yeYouTube, akusayi kubakho mxholo nangaliphi na ixesha.
Ngolwandiso siya kuba nakho ukubasusa kwiingcebiso okanye kwiingcebiso zewebhu. Yintoni egqithisile, kuya kubakho ukubasusa kuphando. Ke ngoko, ukuba kukho igcisa, ijelo okanye ingoma oyithiyileyo ngamandla akho onke, ungayiphelisa ngokupheleleyo ngale ndlela, ngekhe uphinde uyifumane xa usebenzisa iwebhu.
1 Cima iividiyo zika-YouTube okanye amajelo
2 Lawula uluhlu olwenzayo
Cima iividiyo zika-YouTube okanye amajelo
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kule meko yile khuphela ulwandiso kwisikhangeli. Ukuba usebenzisa iGoogle Chrome, unokuzikhuphela kuyo eli khonkco. Ngelixa ungumsebenzisi weMozilla Firefox, ungayikhuphela kwesi sixhobo. Ke siyifaka kwisikhangeli sethu kwaye sikulungele ukungena kwiYouTube siyisebenzisa. Uya kubona ukuba ukusetyenziswa kolwandiso kulula kakhulu.
Xa siyifakile kwaye sele sikwiwebhu, kufuneka ucofe kwi icon yolwandiso, emi kwicala lasekunene lesikhangeli. Ke, kuyo sinebar yokufaka umbhalo, onokuba ligama lejelo, imvumi okanye ingoma. Ecaleni kwale bar sineqhosha elisivumela ukuba sikhethe ukuba ingaba yintoni esiyikhangelayo yitshaneli okanye ividiyo, ukuze olu phando lukhawuleze kwaye lusebenze ngakumbi.
Yonke into esifuna ukuyishenxisa, siyayongeza kuluhlu lwethu, Ukucofa kwiqhosha eliluhlaza elithi Yongeza. Olu luhlu luya kuqokelela wonke umxholo esiwuthintele kwiakhawunti yethu, ukuthintela ukuba singababoni xa singena kuYouTube. Asinamda xa sisongeza umxholo kuyo. Kwakhona, ukuba nangaliphi na ixesha sitshintsha ingqondo malunga nenye, sinokuhlala siyisusa kolu luhlu silwenzileyo. Ke sihlala sinethuba lokuhlengahlengisa into esiyenzayo.
Lawula uluhlu olwenzayo
Kulwandiso sinezinto ezimbalwa onokukhetha kuzo, oko kuyakusivumela ukuba silawule esikwenzayo. Ke ukuba senze uluhlu olunomxholo we-YouTube esifuna ukuwuvimba, singangena olo luhlu nangaliphi na ixesha kwaye sibone ukuba ngowuphi umxholo esiwungenileyo. Ke siyabona ukuba into esiyongezile ichanekile, okanye ukuba sibeke into ekungafanelekanga ukuba ikuluhlu lolu.
Ukongeza, sinokhetho lokhuseleko, olunomdla kule meko. Kuba iyakusivumela ukuba silawule abanokufikelela kolu luhlu Umxholo ovaliweyo kwiYouTube. Ke ukuba wabelana ngecompyuter kunye nomnye umntu, uya kuba nakho ukuhamba okanye uthintele omnye umntu ekubeni angene kuyo. Le yinto umsebenzisi ngamnye aya kuba nakho ukuyilawula ngokuthanda kwakhe kulwandiso ngokwalo ngendlela elula. Kulungile ukubona ukuba unakho ukubanakho kokwenza ngokwezifiso.
Ukuba sifuna ukususa umxholo kuluhlu lwethu, sinokubona ukuba kwicala lasekunene kungeno ngalunye okanye kumxholo, Sifumana ukhetho lokucima, Ngombhalo Cima ngesiNgesi. Ngokucofa olu khetho, sinokususa lo mxholo, nokuba ngumjelo okanye ividiyo, kolu luhlu, siyenze ifumaneke kwakhona kwiYouTube. Ukuba into esiyifunayo kule meko kukususa uluhlu olupheleleyo, sinokusebenzisa inketho ecacileyo, eya kuthi icime zonke iividiyo kunye namajelo esiwafakileyo. Olukhetho olukhululekileyo, nangona luqatha ngakumbi kule meko.
Njengoko ubona, iBlocker yeVidiyo lulwandiso lwezona ziluncedo kakhulu, kulula ukuzisebenzisa kwaye onokuthi ususe ngazo zonke izinto ezingakuniki mdla xa usebenzisa iYouTube kwikhompyuter yakho. Ucinga ntoni malunga nolwandiso lwesikhangeli sakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Cima iividiyo zika-YouTube kunye namajelo angakungeni kolu lwandiso